Jeremy Renner – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Arrival (2016) Unicode ထူးစမျးစှာ ကမ်ဘာမွပေျေါရောကျရှိလာတဲ့ ဂွိုလျယာဉျပြံကို သှားရောကျစူးစမျးလလေ့ာခှငျ့ရခဲ့တဲ့ သူမ... ကမ်ဘာကွီးပျေါကွရောကျလာမယျ့ အန်တရာယျတှကေိုရော သူတို့ ဘယျလိုအဖွရှောပွီး ကယျတငျကွမလဲ... ထူးစမျးတဲ့ ဂွိုလျသားတှနေဲ့ရော ဘယျလိုအဆကျအသှယျတှလေုပျကွမှာလဲ... စတဲ့ မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ လြှို့ဝှကျသညျးဖို အသညျးတယားယားနဲ့ ကွညျ့ရှုရမယျ့ ဇာတျကား ကောငျးလေးပါ... Rating ကလညျး 8.1 တောငျရရှိထားတာဆိုတော့ ထှထှေထေူးထူး သိပျပွောစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး... မငျးသမီး Amy Adams နဲ့ 28 weeks later, Mission impossible ဇာတျကားမြား, Mavel မှ ထုတျတဲ့ Avengers ဇာတျကားမြားအစရှိတဲ့ ဒိတျဒိတျကြဲဇာတျကားတျောတျောမြားမြားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားဖူးတဲ့ မငျးသားကွီး Jeremy Renner တို့က အဓိကဇာတျကောငျနရောက ပါဝငျထားတာဆိုတော့ မကွညျ့ဖွဈလိုကျရငျ နောကျတရသှားစမေယျ့ ကားကောငျးတဈကားလို့ပဲ ညှနျးလိုကျပါရစေ... Credit Review Zawgyi ထူးစမ်းစွာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂြိုလ်ယာဉ်ပျံကို သွားရောက်စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့ သူမ... ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကြရောက်လာမယ့် အန္တရာယ်တွေကိုရော သူတို့ ဘယ်လိုအဖြေရှာပြီး ကယ်တင်ကြမလဲ... ထူးစမ်းတဲ့ ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ရော ...
IMDB: 7.9/10 589957 votes
Avengers: Endgame (2019) ပထမဆုံးအနေနဲ့ Endgame ရဲ့ သုံးနာရီဟာ ရှည်လွန်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ကြည့်နေရင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စီးမျောသွားပြီး အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိလိုက်တဲ့ အထိကို ကောင်းလွန်းပါတယ်။Endgame ဟာ MCU ဆယ့်တစ်နှစ်တာရဲ့ အဆုံးသတ်ဆိုတာနဲ့ အညီ Iron Man (2008) က စလို့ လမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့ MCU ရဲ့ Infinity Saga ခရီးဟာ အဆုံးကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ Endgame ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ခံစားချက်မျိုးစုံပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြဖို့မတတ်စွမ်းနိုင်တာကြောင့် review ရေးရတာ တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။Endgame မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်တွေအပြင် supporting role တွေကိုပါ role အနိမ့်အမြင့်ညီအောင် မျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ Infinity War က အရှိန်မသေသေးတာကို ပြသွားပြီးနောက်တော့ Endgame ရဲ့ plot နဲ့ ...
Avengers: Age of Ultron (2015) အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Avengers: Age of Ultron လာပါပြီဗျာ။ ထွက်ထွက်ချင်း တစ်ရက်ထဲနဲ့ကြည့်နိုင်အောင် ၃ ယောက်ပေါင်းပြီးကြိုးစားပေးပေမဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ သိပ္ပံအသုံးအနှုန်းတွေက ခက်တာရယ် သူတို့ပြောတဲ့ ရယ်စရာလေးတွေက အစ ရသမပျက်ရအောင် စကားလုံးတွေရွေးချယ်နေရတာရယ်ကြောင့် တစ်ရက်ထပ်ယူလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ဒီဇာတ်ကားရဲ့အစကိုတော့ Winter Soilder ရဲ့အဆုံးကနေဆက်ထားပါတယ်။ Hydra အဖွဲ့ရဲ့လက်ထဲက Loki ရဲ့ တုတ်ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီးယူလာတာကနေ စထားပါတယ်။ တိုနီစတာ့ခ်(Ironman) နဲ့ ဘရုစ်ဘန်နာ(Hulk)တို့ဟာ တောင်ဝှေးရဲ့အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု ပရိုဂရမ်(Ultron) ကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Ultron တကယ်နိုးထလာတဲ့အခါမှာ သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းမဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုံးသတ်အထိပါဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ တိုးလာတဲ့ Avenger အသစ်တွေကိုလဲ တွေ့ရပါတော့မယ်။ ဇာတ်ကားကို ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်အောင် အညွှန်းမှာ အများကြီးမရေးထားတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ် ဘယ်လောက်ပဲအများကြီးရေးပေးပေး ဘယ်လိုမှ မပြည့်စုံနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ ...
IMDB: 7.4/10 640,793 votes
The Avengers (2012) Captain America ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားလေးပါ... လူဆိုးကလဲ နတ်ဘုရား...ဇာတ်လိုက်တွေကလဲ လူစွမ်းကောင်းတွေချည်းဆိုတော့ကမ္ဘာမှာဝင်ငွေတွေ စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ...တော်တော်များများကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာစာတန်းထိုးလေးနဲ့ ကြည့်စေချင်တာကြောင့်တင်ဖြစ်သွားတာပါ.... Credit Review
IMDB: 8.1/10 1,157,818 votes
Thor (2011) ကျနော်အကြိုက်ဆုံး superhero ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး.. The Avengers (2012) တင်မက Captain America: The First Avenger (2011) တို့ဟာလည်း ဒီ Thor (2011) ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်.. ဒီတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ superhero ဇာတ်ကားတွေ နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့ရမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါ.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ခဏခဏ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ .. ကျွန်တော်လိုပဲ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ရော မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Credit Review
IMDB: 7.0/10 661,810 votes
Captain America: Civil War (2016) Age of Ultron အပြီးမှာ ပြန်လည်စုစည်းထားတဲ့ Avenger တွေဟာ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု ဆင်နွဲရင်း မတော်တဆ လူတွေသေရပြန်ပါတယ်။ Avenger တွေရဲ့ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ ပျက်စီးမှုတွေ များလွန်းတာကို သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုကို နိုင်ငံများစွာက လက်မှတ်ထိုးပြီး UN ရဲ့ လက်အောက်မှာ Avenger တွေကို ထားဖို့ဆန္ဒပြုလာပါတော့တယ်။ ဒါကို ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့် နောင်တရနေတဲ့ Iromman က နောက်ထပ် အမှားတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့လို့ တွေးပြီး ချက်ချင်းလက်ခံနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို ယုံကြည်တဲ့ Captain America ကတော့ လုံးဝလက်မခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီစာချုပ်ကို အတည်ပြုနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ပေါ်လာပြီး Cap ရဲ့ သူငယ်ချင်း Winter Soilder ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်လို့ အားလုံးက ထင်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့ကို ကူညီချင်တဲ့ Cap နဲ့ ဘက်ကီကို ...
IMDB: 7.8/10 552,484 votes
The Bourne Legacy (2012) Unicode The Bourne Ultimateum ဇာတျကားတုနျးက အဖွဈအပကျြမြားကွောငျ့ ပွညျသူလူထုနှငျ့ နိုငျငံရေးသမားမြားသညျ လမျးမြားပျေါသို့ ထှကျလာကာ CIA နှငျ့ ရငျဆိုငျလာသညျ။ ထို့ကွောငျ့ CIA သညျ ပွဿနာအရှုပျအထှေးတှေ ယခုထကျ ပိုမိုမြားပွားမလာခငျ သူတို့၏ Operation Outcome ပရျောဂကျြကွီးအား လကျစတုံးဖြောကျဖကျြပဈဖို့ ကွံရှယျလာခဲ့ကွသညျ။ သဲလှနျစတဈခုမကနျြ မွကွေီးထဲ မွှပျနှံပဈဖို့ အမိနျ့ပေးခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ စခေိုငျးခွငျးခံရသူ စပိုငျမြားသညျ Operation Outcome ၏ လူအားလုံးကို သတျတော့သညျ။ အရှေနျခရော့ဈ (ဂယျြရီမီးရနျနာ) က Operation Outcome ၏ အေးဂငျြ့တဈဦး ဖွဈသောကွောငျ့ လုပျကွံသူမြားလကျကနေ လှတျမွောကျအောငျ ကိုယျလှတျရုနျးပွေးရတော့သညျ။ ပွေးရငျးလှားရငျး သူနှငျ့ဘဝတူအဖွဈ ဆုံစညျးလာသူက ဒေါကျတာစတီဗငျစနိုကျဒါ (မငျးသမီးခြော ရခေယျြဝိုကျဈ) ဖွဈသညျ။ ဒေါကျတာစတီဗငျသညျ Outcome အေးဂငျြ့မြားကို ဖနျတီးပုံဖျောရာတှငျ အဓိက အကူအညီပေးခဲ့သညျ့ ဆရာဝနျတဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ သူလညျးလုပျကွံသူမြား လကျကနေ လှတျမွောကျအောငျ မနညျးကွိုးစားရရှာသညျ။ သူတို့ကို ...
IMDB: 6.7/10 265,207 votes
Tag (2018) အသက်ကြီးလာလို့ ကစားတာရပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကစားတာရပ်လိုက်တာလို့ အသက်ကြီးလာတာ” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်က သူတို့ရဲ့လက်သုံးဆောင်ပုဒ်တစ်ခုပေါ့။ သူတို့ဆိုတာ Hogan, Bob, Chilli, Sable, Jerry တို့သူငယ်ချင်းငါးယောက်အဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။ ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကျောင်းနေဖက် ဆော့ဖော်ဆော့ဖက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လည်း သံယောဇဉ်အတော်ရှိကြပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကိုယ့်လမ်းကိုလျှောက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သူစိမ်းတွေလိုတကွဲတပြားမဖြစ်ချင်တဲ့သူတို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ဟာ အချိန်တန်ရင်ခွဲခွာရမယ်ဆိုတဲ့ လောကကြီးရဲ့နိယာမကို ဆန့်ကျင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်တော့တယ်။ အဲဒါကတော့ အသက်ကြီးတဲ့အချိန် ငယ်ငယ်တုန်းကလို ဆက်ပြီးဆော့ကစားတဲ့နည်းပါပဲ။ သူတို့ဆော့တဲ့ကစားနည်းကို မြန်မာလိုခေါ်ရရင်တော့ စိန်ပြေးလိုက်တမ်းပေါ့ဗျာ။ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေဟာ အဲဒီစိန်ပြေးလိုက်တမ်းကို နှစ်တိုင်းရဲ့မေလတိုင်းမှာ ကစားလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကလို လူစုလူဝေးနဲ့ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာဆော့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ မေလအတွင်းတစ်ရက်ရက်မှာခွေးရူးဖြစ်တဲ့သူက ကိုယ်ဖမ်းချင်တဲ့လူရှိတဲ့နေရာကို ရောက်အောင်လာပြီး ဖမ်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကိုမြင်ရင်လည်း အဖမ်းခံရတဲ့သူက ထွက်ပြေးနိုင်တဲ့အတွက် မမှတ်မိအောင်ရုပ်တွေဘာတွေ ဖျက်ပြီးအနားရောက်မှအမိဖမ်းရပါတယ်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ သူတို့သူငယ်ချင်းထဲမှာ Jerry ဆိုတဲ့တစ်ယောက်က အဲဒီကစားနည်းစဆော့ပါပြီဆိုကတည်းက နှစ် ၃၀ တိုင်အောင် တစ်ခါမှအဖမ်းမခံရသေးပါဘူး။ ၃၁ နှစ်မြောက်မှာတော့ Jerry တစ်ယောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့ ဒီကစားပွဲကနေအကောင်းဆုံးစံချိန်နဲ့ အပြီးတိုင်အနားယူတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို သိသွားတဲ့ Hogan ဟာ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကိုအမြန်စုပြီးတော့ မင်္ဂလာပွဲမှာခြေချုပ်မိနေမယ့် Jerry ကိုဖမ်းပြီး သူ့ရဲ့နှစ် ၃၀ ...
IMDB: 6.6/10 71,771 votes